अमेरिकामा कोरोनाको औ`षधि भेटियो, परी`क्षण गरेको औसधिले बिरामी निको हुन् थालेपछि सर्वत्र खुशीयाली छायो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/अमेरिकामा कोरोनाको औ`षधि भेटियो, परी`क्षण गरेको औसधिले बिरामी निको हुन् थालेपछि सर्वत्र खुशीयाली छायो !!
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले म`हामा`रीका रुपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना`भाइरस रोकथामका लागि पछिल्लो पटक प्रयोगमा ल्याइएको औ’षधि निकै प्र’भावकारी रहेको बताएका छन् । विश्वभर सं’क्रमितको संख्या बढ्दै गएको र आर्थिक वि’श्रृंख’लता नि’म्त्याए’को कोरोना भाइरसको औ’षधिले परी`क्षणका क्रममा धेरै राम्रो काम गरेपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ ।
औ’षधिको परी`क्षण निकै सफल भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसको स’कारात्मक असर वा’लस्ट्रि’ट सहित विश्वको शेयर बजारमा देखिएको छ । अमेरिकामा एक दशकयताकै सबैभन्दा ख’राब आर्थिक स्थिति देखिए पनि वा’लस्ट्रि’टमा सका’रात्मक प्रभाव देखिएको छ । अर्कातर्फ जर्मनीको पनि दोस्रो वि’श्वयु’द्ध पछि पहिलोपटक अ’र्थव्यव’स्था सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर २ लाख २८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको निध`न भइसकेको छ । यही बीच कोरोना भाइरस महा`मा`री फैलिएपछि पहिलोपटक विश्व स्वास्थ्य संगठनको आ’पतका’लीन समितिको बैठक पनि यही बिहीबार बस्दैछ । रेमडेसिभर नामको औ’षधिको क्लिनिकल परी`क्षणले मानिसको निको हुने दर करिब ३० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
हालसम्म यो औ’षधि नै नयाँ कोरोना भाइरसको उपचारमा सबैभन्दा सफल मानिएको छ ।अमेरिकी इ’पि’डि’मियोलो’जिस्ट डा ए’न्थोनी फ’चीले संवाददाताहरुसँग रे’मडे’सिभर औ’षधिको प्र’भाव र असर निकै उत्साहप्रद रहेको बताउनुभयो । यो औ’षधि इ’बोला भाइरसका बिरामीका लागि भने असफल देखिएको थियो ।
यही औ’षधि चीनको उहानका बिरामीमा परीक्षण गर्दा पनि त्यति सफल मानिएको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका वरिष्ट अधिकृत माइकल रायनले पछिल्लो नतिजाका बारेमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले परीक्षणको विस्तृत विवरण प्राप्त नहुँदासम्म आफूले यस बारेमा टिप्पणी नगर्ने बताउनुभयो ।